Bilaash markasta bilaash ma ahan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shirkado adeegsada farsamo khiyaano u dhow
Bilaash markasta bilaash ma ahan
Bilaash qaali bay kugu noqon kartaa
La daabacay måndag 24 juni 2013 kl 13.23
Dacwadaha loo gubinayo wakaalada macaamiisha ”Konsumentverket” lagana gubinayo shirkadaha caafimaadka ayaa aad bariyahaan danbe aad u soo kordhey. Janet Lindberg waxey taabtey "haa" su’aal la xiriirtey alaab bilaasha loo tijaabinayo internetka. Arintaas oo ay maanta ka shaleynayso.
– Aaad baan uga caroodey. Waayo ma jirto meel ay far waaweyn ku qorantahay lacag baa laga goosanayaa akoonkeyga. badanaa markaad wax gadatid waxaa ku qoran: mad rabtaa in aad sii waddatid carbunaada iyo in kale. Laakiin arintaas aniga ma arkin, ayey tiri Janet Lindberg.
Taabashada ay taabatey "haa" ayey Janet ogaansho la’aan gashay heshiis ah in ay rukun u noqodey shirkada. Shirkadan oo ah mid dhanka internetka ah oo la yiraahdo Healt C-P ayaa sidaas darteed akonkeeda kala baxdey 700 oo karon. Henrik Örnsted oo ah baari katirsan wakaalada macaamiisha ayaa asago horey dacwadahaan aadka u badan ee loo jeedinayo shirkadaha dhanka internetka kajira ee iibiya alaabaha cuntada dawada leh.
– Arintaa sida ay u socoto waa mid aad u soo badaneysa hadii la fiiriyo dacwadaha soo badanya ee laga soo gudbinayo, ayuu yeri Henrik Örnstedt oo katirsan wakaalada macaamiisha.
Dacwadaha soo badanya ee dhanka ah shirkadaha suuqaan ka ganacsada ayaa waxay cadey u tahay ay jirto arin ku cusub suuqaan, taas oo ah in shirkadaha adeegsadaan farsamo aad ugu dhow khiyaano iyo masumaasuq.
– Sidaan u arko waxa weyo in aan si cad oo aan mugdi ku jirin loola dhaqmin macaamiisha. Waxaan oran karaa hadii aysan arintaan aheyn khiyaano waa mid aad ugu dhow, ayuu yeri Henrik Örnstedt.
Balse si ay macaamiisah uga gaashantaan shirkadahan farsamadaha khiyaanada u dhow isticmaala ayaa ah in uu qofka xasuusnaado in aysan jirin wax bilaash ah nolasha.
– Caadado waxey tahay in qofka markuu dalabado baaketka tijaabadaha in uu markaas galay heshiis ah rukumasho. Hadii uu shaki ku jiro waxaa haboon in layska dhaafo. Waxa bilaashka ah qaali ayey galdaal ka noqan karaan, ayuu yeri Henrik Örnstedt.